Maxaad Ka Taqaana Xushmada Aishwarya Rai Bachchan Ay U Muujiso Dadka Ka Weyn!! - Hablaha Media Network
Maxaad Ka Taqaana Xushmada Aishwarya Rai Bachchan Ay U Muujiso Dadka Ka Weyn!!
HMN:- Aishwara Rai Bachchan waa quruxley, atariisho magac weyn leh, hooyo fiican iyo waliba xaas fiican, balse marka laga soo tago quruxdeeda iyo wanaageda Familkeeda dhexdiisa ay ku leedahay.
waxaa jirto xidigtaan inee aad u qadariso dadka ka weyn qaasatan xidigihii hore mana ahan dadka kibirka badan ama isla weyn.
Hema Malini arin taabatay oo aysan ka filaneyn Aish ayee aragtay intii lagu jiray munaasabadii lagu bixinayey abaal marinta Dadasaheb Phalke.
Hema ayaa arinkaan kashekeysay xili ay wareysi la yeelanayen wargeyska Hindustani Times, waxayna tiri Hema,” markee xafladii dhamaatay waxaan bilaway inaa xoga yara sugo gaarigeyga oo markaaba darawalka meel xoga albaabka ka fog Parking dhigtay.
intaa kadib intii uu soo yara socday ayaa waqti yar qaadatay balse waxaan daremay in qofkale ila taaganyahay hadanaa ogow isdhahayna waaba Aishwarya.
markaasan weydiyay oo aan dhahay maxaaa xiligaa wali u joogtaa?, waxay iigu jawabtay ‘gaarigada intuu ka imaanayo wan kula joogaya oo kama tagayo Hema ji.'”
sido kale xidigtaan ayaa shegtay sida ay Aish isaga ilaalineysay dadka ayada rabeen inee sawirka la galaan amaba mashquuliyaan iyadoo diidaned in Hema meel cidlo oga tagto ama dhinac kaligeed iska taagnaato.
hadaba Hema ayaa hadalki sii wadata,” ugu dambeyn waxaa yimid gaarigeyga Aish waxay bilawday inee iga furto daaqada ama albaabka gaariga ayadoo dooneysa inee igu hubsato gudaha gaariga.
markaan galay gaariga kadib ayee iyada dhankaa iyo gaarigeda u dhaqaaqday, runtii arinkaas waa mid aan la yaabay mana ka fileen Aish sidaas, waayo waxaan dareemay inee xushmad weyn iiheeso Aishwarya.
magaranaayo inee Bollywoodka kujiraan qof ayada oo kale ah balse waaa qof dadka ka weyn xushmad u heyso dabcan waa dhif iyo naado in lahelo ayadoo kale inkastoo dadka isku mid aheyn.”